Pejin-tranonkala 8 ahafahana misintona ny sary famantarana | Famoronana an-tserasera
Imbetsaka isika no mila miatrika karazana asa samy hafa izay mila. Iray amin'ireo loharano izay tsy maintsy tadiavinao matetika kokoa ny sary famantarana. Matetika izy io dia iray amin'ireo zavatra manome olana indrindra satria rehefa mandefa logo anay ny mpanjifanay mba hahafahanay manatanteraka ny asanay dia mazàna izy ireo manao izany amin'ny vahaolana ambany dia ambany, izay manala ny efitrano rehetra hanaovana hetsika. Avy eo rehefa tsy maintsy mandaka pejin-tranonkala tsy tambo isaina isika hahitantsika sary famantarana miaraka amina fanapahan-kevitra ekena antonony izay ahafahantsika mampivelatra asa tsara. Rehefa miresaka momba ny mari-pamantarana marika fanta-daza manerantany na iraisam-pirenena isika dia tsy hanana olana amin'ny fahitana azy ireo. Na izany aza, raha mila mitady ny sary famantarana ny orinasan-tserasera na orinasa kely tsy fantatra amin'ny sehatra marobe, ohatra, dia ho sarotra ny raharaha. Misy foana ny loharanon'ny penina ao amin'ny Adobe Illustrator hahatratrarana sary famantarana vita amin'ny vector fa angamba mety ho lasa fampiasam-bola tsy ilaina amin'ny fotoana izany raha haintsika ny mahita ny banky logo sy loharano tsara hampidina azy ireo miaraka amina kalitao tsara ary vonona hampidirina.
Izany no mahatonga ahy eto ambany hanolotra pejy web 10 izay ahitanao logo maro an'isa amin'ny karazana orinasa rehetra. Na ahoana na ahoana, raha tsy mahita ny sary famantarana tadiavinao ao amin'ireo banky loharanom-pahalalana ireo ianao dia afaka miditra foana ny lahatsoratray izay anoloranay anao na tsy mihoatra na latsaky ny Logo 2.000 natolotr'i Vivi Suarez avy amin'ny MagicalArtStudio.
Mariky an'izao tontolo izao
Fampidinana maimaim-poana rehetra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Pejin-tranonkala 8 izay anaovana fampidinana ireo logo vector
Diego Vargas Almonacid dia hoy izy:
Ity dia loharano TSARA!
Valiny tamin'i Diego Vargas Almonacid